Digniin ku socota Somaliland. |
Digniin ku socota Somaliland.
Taariikhda waxa loo barta oo dugsiyada iyo jaamacadaha loogu dhiga dadku in ay ka faideystaan waxii horay u dhacay oo soo maray dadkii ka horeyay.Waxii lagu guleystay waa lagu dayda oo waa la raaca,waxii lagu khasaareyna waa laga leexda wadadii loo marey jabkaas.
Waxaan uga digeya shacabka Somaliland in aysan ku kadsoomin shirkadaha leh waxaan baareyna shidaal oo uMadaxweyne Silaanyo ku qaabilay madaxtooyada Hargeysa 07/01/2014 in ayna noqonin sidii shirkaddii Puntland dhacday kheyraadkii dhulka ku jiray qaarkood kana baxsatay(dhuuntay)habeen madow.
Waa talaabo wanaagsan in shidaal iyo kheyraadka kale oo ku jira dalka la baaro,lakiin waa in sii fiican isha loogu hayo shirkadaha shisheeyaha ah, laguna xoojiya muwadiniin u dhalatay dalka oo taladana wax laga siiyo.Haddii kale waxaa dhici waxii ku dhacay Puntland.
Waxaan huba in kheyraad badan dalka ku jiro ,aqoonyahanno badanna dalku leeyahay ee yaan loo saxeexin shisheeye kheyraadka dalka iyadoo lagala cararayo muwaadininti dalka lahayd.